Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A October 2011 (9)
Q and A October 2011 (9)
၁။ I'm worried about being infected from HIV.
၂။ စီပိုး ရှိတယ်ပြောလို့ ဆေးစစ်ပါတယ်။
၃။ But, i really wanna know is how can i test for HIV in gov clinic
၄။ အာသီးရောင်တဲ့အကြောင်း ဖြေကြားစေလိုတယ်။
၅။ AIDS ရောဂါရှိသူတယောက်၏ လက္ခဏာနှင့်
On Fri, Oct 28, 2011 at 7:53 PM
I had experienced sexual intercourse with CSW about one month ago. I used condom. But, now I'm worried about being infected from HIV. Please tell me how can I confirm? Moreover, can I chat with u if u havealittle free time? I hope your reply saya and please keep privacy.
၁။ HIV Summary
၂။ HIV Tests စမ်းသပ်နည်းများ
၃။ HIV and AIDS တွေကို ဖတ်ပါ။
ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆေးပညာ မေးလိုတာ ရှိပါက အတိုင်းမေးပါ။
Sat, Oct 29, 2011 at 8:56 AM
ကျွန်တော့် အဖေ၊ အသက် ၅၀ ကျော်ဟာ အသည်းခြောက်နေတယ်လို. ဆေးစစ်ချက်ထွက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ စီပိုး ရှိတယ်ပြောလို့ ဆေးစစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေ ပြောတာတော့ စီပိုးမှာကို အမျိုးအစား သတ်မှတ်ချက် အဆင့် ၁၊ ၂၊ ၃ စသည်ဖြင့် ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဆေးစစ်ချက်ထွက်လာတော့ အဆင့် သတ်မှတ်လို့ မရဘူးဆိုပြီး ထွက်လာပါတယ်။ အဲဒါက ဘယ်အခြေ အနေကို ပြောတာလဲ။
၁။ Current Hepatitis C Treatments Work
၂။ Best treatment regimen for hep C
၃။ Hepatitis C and Pregnancy အသဲရောင် (စီ) နဲ့ ကိုယ်ဝန်
စီ ပိုးနဲ့ဆိုင်တာတွေ တပုဒ်စီ ရေးထားတယ်။ ဆိုင်တာကိုသာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုးတွေ့တဲ့အဆင့်၊ ဘာမှ မဖြစ်သေးဘူး။ နောက် အသဲကိုထိခိုက်တဲ့အဆင့်၊ အသဲခြောက်တာ နဲ့ ကင်ဆာ။ ဆေးစစ်တာတွေကတော့ ရှုတ်ထွေးတာပေါ့။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာ။ ကျွန်တော် သိပ်နားမလည်ဘူးဆရာ။ အခုရှင်းပြတာတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့သူတွေနဲ့ နည်းနည်း ရောထွေးနေတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ရှင်းလင်းလင်း ရှင်းပြပေးပါ။ စီပိုးမှာ ဘယ်လို အဆင့်တွေ ရှိတယ်၊ (ဘယ်အဆင့်ကဖြင့် ကုသရင် ပျောက်ကင်းနိုင်မယ်။ ဘယ်အဆင့်ကတော့ လွန်နေပြီ) စသည်ဖြင့်ပေါ့ဆရာ။ စီပိုး ကုသဖို့အတွက် ဘယ်နေရာတွေက အကောင်းဆုံးလဲဆရာ။ ဆရာတို့ ဆေးခန်း လိပ်စာလေးရော သိချင်ပါတယ်။
တပုဒ်ချင်း သပ်သပ်စီ ရေးထားပါတယ်။ ကျွန်တော် တိုင်းပြည် အပြင်မှာသာ နေရသူဖြစ်လို့ အထဲက ဆေးခန်းတွေကို ကောင်းကောင်း မသိပါ။ ဆောရီး။
Hepatitis C စီ ပိုး နောက်ဆက်တွဲ
On Sat, Oct 29, 2011 at 12:13 PM,
Firstly, i'm very glad that u reply me immediately. But, i really wanna know is how can i test for HIV in gov clinic and at what time i can relieve that i'm Retro negative surely?
Sorry, I amaperson who can't reside inside the country and lack the knowledge of medical facilities over there. May I advise not to use SMS for such important subject like health becauseasingle misinterpretation may lead to wrong decision?
အာသီးရောင်တဲ့အကြောင်း ဖြေကြားစေလိုတယ်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။ ဘယ်လို့ ကာကွယ်လို့ရလဲ။ မျိုးရိုး လိုက်တတ်ပါလား။ ဖြစ်နေတာကြာပါပြီ။ ၅ နှစ်လောက်ရှိပြီ။
Respiratory tract infections (1) အသက်ရှူလမ်း အပေါ်ပိုင်း ပိုးဝင်ခြင်း ကို ဖတ်ပါ။
AIDS ရောဂါရှိသူတယောက်၏ လက္ခဏာနှင့် ဘယ်လိုကြောင့် ရောဂါဝင်ရောက်နှိုင်သလည်း သိပါရစေ။
Posted by Dr. Tint Swe at 8:21 AM